अन्तत : रवि लामिछाने टेलिभिजन छोडी लागे सक्रिय राजनितीमा, चुनाब लड्ने पक्का भएपछी बोले रवि लामिछाने
टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने राजनीतिमा आउने भएका छन् । राजनीतिमा होमिने लक्ष्यका साथ उनले हाल कार्यरत ग्यालेक्सी टेलिभिजन छाडेका छन् । उनलाई ग्यालेक्सी टेलिभिजनका कर्मचारीहरुले बिहीबारै बिदाइ गरेका छन् ।
यसरी धुमधामले ज्ञालेक्सी टिभीबाट बिदा भए रवि लामिछाने, उनले चलाउँदै आएको कार्यक्रम सिधा कुरा अब के होला ?
सफल पत्रकार रवि लामिछाने पनि अब सक्रिय राजनीतिमा, यस्तो छ तयारी !
रवि लामिछाने काठमाडौंबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्दै, ग्यालेक्सी टिभीबाट बिदा भए
रवी लामिछानेले राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपामाबाट चुनावमा उठ्ने तयारी